Satria tsy ara-dalàna ny fahapelahana ao Ozbekistan, dia tsy maintsy miafina ny olona LGBTQ+ · Global Voices teny Malagasy
Tsy misy toerana ankalamanjana azo antoka ho an'ity vondrom-piarahamonina ity
MpanoratraGV Central Asia and Caucasus
Voadika ny 11 Desambra 2019 5:36 GMT
Kianja Amir Timur ao Tashkent, renivohitr'i Ozbekistan. saripikan'ny mpanoratra izay naniry ny tsy ho fantatra. Tsy midika ho misolo tena ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+ ny olona hita sary etoana. Sary nahazoana alalana.
Iray amin'ireo firenena Aziatika Afovoany post-sovietika efa vitsy mbola manafay amin'ny alalan'ny lalàna ny fifandraisana ara-nofon'olondehibe (samy lehilahy na samy vehivavy) roa mifanaiky i Ozbekistan. Mety higadra hatramin'ny telo taona ireo hita fa meloka. Voavolavola lalina amin'ny kolontsaina persiana talohan'ny vanim-potoana maoderina ahitana fifankatiavan'olondroa samy lahy na samy vavy sy ny fanehoana azy poetika ny fiarahamonina Ozbeka. Na izany aza dia lasa heloka bevava ny fifandraisan'olondroa samy lahy na samy vavy nandritra ny fanjakazakana rosiana sy sovietika taorian'izany. Tsy nanitsy ny lalàna ny governemanta tao aminy rehefa nahazo ny fahaleovantena i Ozbekistan tamin'ny taona 1991.
Amin'izao fotoana izao, manjaka anaty resaka ao amin'ny firenena ny fankahalana pelaka. Samy manao izany fankahalana pelaka izany na ny manampahefana amin'ny governemanta, na ny mpitarika ara-pivavahana (mitovy daholo ihany na miozolomana na Rosiana Ortôdôksa), sy ireo mpisera aterineto maro, izay tsy miantso ho amin'ny fisamborana fotsiny ihany fa hatramin'ny famonoana ireo olona LGBTQ+ ireo ihany koa. Misy fiantraikany henjana amin'ny vondrom-piarahamonina izany, fa tsy misy intsony ny seha-bahoaka azo antoka ho azy ireo. Indraindray ireo Ozbeka LGBTQ+ ireo voatery hivaro-tena na terena hanampy ny polisy amin'ny fiampangana ireo mitovy aminy. Raha misy mamono mahafaty azy ireny, dia na maivana na tsy misy mihitsy aza ny sazy azon'izay manao izany. Ary mitranga izany raha fantatra ny momba azy ireo.
Nitafatafa tamin'ny iray amin'ireo mpikatroka LGBTQ+ vitsy dia vitsy, izay manolotra fanohanana ara-pitsarana sy ara-tsaina ho an'ilay vondrom-piarahamonina lasa miafina tanteraka, ao Ozbekistan ny Global Voices.
Noho ny antony ara-piarovana dia nesorina ny anaran'ilay mpikatroka. Nahitsy hihafohy kokoa ity antsafa ity.
Global Voices (GV): Inona avy ireo singa lehibe nahatonga ny fielezan'ny fankahalana pelaka eto Ozbekistana amin'izao fotoana?
Bohodir: Ny finoana islamo no antony voalohany mahatonga ny fankahalana pelaka ao amin'ny fiarahamonina Ozbeka, izay mitaky fa tokony hovonoina ireo “besoqolboz” (olona tsy manaraka ny fironana ara-pananahana nentim-paharazana). Maro ireo Ozbeka tsy nahazo fanabeazana no tsy mahatakatra hoe firenena lahika anie i Ozbekistan, sady tsy mahita zavatra tsy mety amin'ny fiantsoana malalaka ny hamonoana ny olona LGBT, indrindra ny ao amin'ny media sosialy. Sady tsy azo saziana ireny no tsy matahotra, satria mbola heloka bevava araka ny fehezan-dalana famaizana andininy faha-120 ny homosexualité.
Taty aoriandriana no niakatra io fankahalàna pelaka io. Fantsona mpankahala pelaka maro [ao amin'ny media sosialy] no nahitana namoaka torohay momba ny olona LGBT, ary ahitana sary sy angona ara-pasipaoro amin'ny tranga sasany.
Ny antony faharoa mahatonga ny fankahalana pelaka dia ny lalàna, izay mahatonga ny fanjakana mankahala ny pelaka. Milaza ny olona sasany fa na dia misy aza ny Andininy faha-120, dia tsy ampiharina izany. Saingy efa-bolana lasa izay, lehilahy roa no nosamborina teo ambanin'izany lalàna izany. Miteraka tontolo fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy tsy fanasaziana heloka bevava ny fisian'ny andininy faha-120. Nametraka olona tanaty lisitra mainty teo ambanin'ity lalàna ity ihany koa, sy nampijaly azy ireo sy nitondra azy ireo tamin'ny fahaketrahana ara-moraly ary nandrahona azy ireo tsy hahita intsony ny fianakavian'izy ireo sy ny mpampiasa azy ireo ny ao amin'ny sampana mpampihatra lalàna.
GV: Inona no paikady ampiasain'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+ mba hianganana amin'ny tontolo tahaka izany?
B: Tena sarotra ny mamolavola saina tia firaisankina ao anatin'ny fiarahamonina mankahala pelaka. Misy foana ny fankahalana pelaka ao anatiny. Miezaka mitady fialokalofana ao amin'ny Silamo ny sasany, ny hafa nivadika pelaka mankahala pelaka ary manjary fandrahonana goavana ho an'ny olona LGBT hafa. Ny sasany moa lasa mamono tena mihitsy.
Maro ireo hevi-draikitra momba ny vondrom-piarahamonina LGBT, anisan'izany ny fiampangana fanararaotana ireo ankizy tsy ampy taona, na mahatonga ny faharinganan'ny firenena Ozbeka.
Matahotra ny ho voaroaka, lesbiana sy pelaka marobe no miditra amin'ny mariazy [mahazatra] tsy araka ny sitrapon'izy ireo, noho ny fanerena avy amin'ny fianakaviana. Aorian'ny fotoana fohy, rehefa fantatra ny fironana ara-pananahan'izy ireo, dia misara-panambadiana na manana fiainana roa izy ireo..
Tabilao mampiseho ny fomba fiakanjo “maotina” ho an'ny mpianatra ao amin'ny Oniversitem-panjakana Ozbek ao Tashkent. Sary avy amin'ny mpanoratra tsy te-hitonona anarana. Nahazoana alalana.
GV: Manoloana ny zavatra nofaritanao, misy zavatra azo atao hanohanana ny vondrom-piarahamonina ve?
(B) Tena ilaina tanteraka ny mametraka fototra ho an'ny tetikasa sy fisantarana andraikitra vaovao. Mba hananganana tranonkala hanapariahana vaovao ho fanatsarana ny kalitaon'ny fiainan'ny olona LGBT. Amin'izao fotoana izao, dia nahazo ny fahatokisan'ny fiarahamonina ireo jiolahy sy mpankahala pelaka ary mifehy ny sehatra fihaonana sy ireo fantsona rehetra momba ny olana LGBT ao Ozbekistan. Mety hidiran-doza ny olona marobe noho izany. Satria matahotra izy ireo, dia matetika milaza ny olona LGBT fa milamina ny zava-drehetra, satria tsy fantatr'izy ireo izay haleha hahazoana fanohanana.
GV: Misy ve ny famantarana fa mety hahazaka kokoa sy mampiaty ny rehetra fiarahamonina Ozbek any aoriandriana any?
B: Voalohany indrindra, dia mila hetsika ara-panabeazana hoan'ireo miara miasa amin'ny fiarahamonina izahay; mila manangana vondrona volantera afaka manampy mamolavola endrika fikatrohana izahay. Mila manaramaso hatrany ireo heloka rehetra ateraky ny fankahalana fironanana ara-nofo izahay. Mila manaitra ireo fikambanana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona isika, mifototra amin'izany fanarahamaso izany, momba ny heloka noho ny fankahalana sy ny fankalahana ny olona LGBT.
Saingy mila amafisinay ny fifampitokisana eo amin'ny samy LGBT sy ny olona rehetra eo anivon'ny fiarahamonina. Mila matoky antsika ny vahoaka, tsy ampy fotsiny izao ny hanao ny karazam-pikatrohana rehetra ilaina vitaina. Ohatra, satria mamaritra anay ho jiolhy ny lalàna, tsy manana fomba hitondrana ny olana eo anivon'ny mpanao lalàna isika.
Psykôlôgy afaka manampy ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina LGBT lasibatry ny herisetra na ny fanavakavahana ny mpikatroka sasany.
Miasa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ireo mpikatroka sasany ary mampahafantatra ny vondrom-piarahamonina LGBT momba ny VIH, manampy azy ireo hiditra amin'ny toeram-pitsaboana SIDA. Na izany aza, mpikambana tena vitsy ao amin'ny vondrom-piarahamonina no mahafantatra momba izany.
Raha mijanona mangina isika, dia mankasitraka ny heloka bevava, ny fanavakavahana sy ny herisetra rehetra.